Mountain Television nation's first popular and leading analytical news channel. Mountain covers all the latest news from Nepal, Political News, Science news, Social news, Sport news, Ecomony news, Business, Entertainment, Movie, Nepali Model, Actor, Actores, Audio, Video, Interview and many more. युवराजसिंहद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा – Emountain TV
युवराजसिंहद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा
काठमाडौं, २७ जेठ । भारतीय क्रिकेटर युवराज सिंहले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास लिएको घोषणा गरेका छन् । सोमबार भारतको मुम्बईमा पत्रकार सम्मेलन गरी क्रिकेटर सिंहले तत्काल लागु हुने गरी अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरेका हुन्।
सन् २ हजारदेखि भारतीय राष्ट्रिय टोलीबाट डेब्यु गरेका सिंहले २०११ मा भारतले विश्वकप जित्दा महत्वपूर्ण भूमिका खेलेका थिए । भारतका लागि ६० टेस्ट म्याच खेलेका उनले १ हजार ९ सय रन बनाएका छन् । त्यसमध्ये तीन सतक र ११ वटा अर्धसतक छन्। सन्यासको घोषणा गर्दै सिंहले आफ्ना समर्थक र प्रसंशकलाई धन्यवाद दिएका छन् ।
३ सय ४ एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय खेल खेलेका युवराजले ८ हजार ७ सय एक रन बनाएका छन्। वान डे इन्टरनेशनलमा उनले १४ सतक र ५२ अर्धसतक हानेका छन्। सन २००७ को टी–ट्वान्टी विश्वकपमा उनले इंग्ल्यान्डविरूद्ध १२ बलमा ५० रन हानेका थिए।
१२ बलमा अर्धसतक हान्ने उनी पहिलो ब्याट्सम्यान हुन् । बलिङतर्फ उनले १सय ११ विकेट लिएका छन्। सन २०११ को विश्वकपमा उनी म्यान अफ द टुर्नामेन्ट बनेका थिए । त्यसपछि उनलाई क्यान्सर भएको थियो । क्यान्सरको उपचारपछि भने पहिलाजस्तो फर्ममा आउन नसकेका सिंहले सन्यासको घोषणा गरेका हुन् ।